Tracy Oliver waxay heshiis iskaashi la saxiixatay Apple TV + si loo abuuro taxane iyo filimaan | Waxaan ka socdaa mac
Mar labaad, wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira adeegga fiidiyowga ee Apple ayaa ka yimid Hollywood Reporter. Sida laga soo xigtay warbaahintan, Apple wuxuu saxiixay a heshiiska wadashaqeynta Tracy Oliver si loo abuuro waxyaabo gaar ah oo taxane ah iyo filimaan ah.
Tracy Oliver ayaa ka dambeeya qoraallada filimada sida Gabdhaha Safarka iyo taxanaha The Club Dumar First. Qodobada heshiiska lama shaacin, laakiin bayaankan ayaa tilmaamaya eHeshiiska Oliver uu la galay Apple waa 8 tiradood (Sidee Mareykanku u jecel yihiin qaabkan sharaxaada tirada).
Mahadsanid heshiiskan, soosaaraha Tracy Oliver, Soosaarayaasha Tracy Yvonne ayaa u abuuri doona Apple TV mashaariic kala duwan + iyadoo si gaar ah diiradda loo saari doono sheekooyin muhiim ah, ka mid noqoshada warshadaha filimada mid ka mid ah saldhigyadeeda waaweyn.
Tracy Oliver, oo haddii aad ogaatay sawirka madaxa ka ah qodobkan uu yahay madow, waxay ku guuleysatay inay ku soo ururiso in ka badan 100 milyan oo doolar qoraalka filimka Gabdhaha Safarka, ahaanshaha haweeneydii ugu horreysay ee madow ee qaadata.
Intaa waxaa dheer in ay iska kaashadeen qoraalka filimka Gabdhaha Safarka iyo taxanaha Xaasaska Kowaad, Waxa kale oo uu ka qayb galay cinwaano kale sida Little, Qorraxdu Sidoo Kale Waa Xiddig y Tima Jaraha: Qof Walba Wuxuu U Baahan Yahay Timo-jarin (Timajareha: Goynta Xiga).
Xilligan, waa soosaarida taxane taxane ah oo loogu talagalay Amazon oo ay la socdaan Amy Poehler. Wuxuu kaloo qabtay hagitaan iyo tarjumaad hawleed.
Heshiiskan waxaa dheer shirkado badan oo wax soo saar ayaa yimid bilihii la soo dhaafay iyaga oo wata qorayaal kala duwan si loo abuuro waxyaabo cusub sida Warnes Bross oo ay weheliso Angela Robinson, CBS Studios oo ay weheliso Jenny Lumet iyo Telefishanka 20aad oo leh Ron Moore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Tracy Oliver waxay heshiis iskaashi la saxiixatay Apple TV + si loo abuuro taxane iyo filimaan
Iibsashada shirkadaha ay Apple maamusho 2016 ilaa 2020